Ibhanti kunye ne-pulley ziqhutywa yimoto, zigqithiselwa kwishafti yokuqhuba ngesinciphisi, kwaye zayangqinelaniswa neshafti eqhutyiweyo kwizixhobo zokwahlulahlula, kwaye zisebenza kumacala ahlukeneyo. Izinto ezahlukeneyo zomgubo owomileyo zongezwa kwi-hopper ephezulu kwezixhobo, kwaye ufake ii-equa ezimbini ...
Izichumisi aziqhelekanga kumafama kwiinkalo ezininzi. Izixa ezikhulu zezichumiso ziyafuneka phantse minyaka le. Owona msebenzi wezichumisi kukuphucula iipropathi zomhlaba kunye nokuphucula ukuchuma komhlaba. Esinye seziseko ezibonakalayo kwimveliso yezolimo; Nangona kunjalo, ikhomputha yeFerti ...
Omnye wemicimbi ephambili ngamaxabiso ezixhobo zesichumiso: Isixhobo sesichumiso sisisixhobo esikhulu, kwaye ixabiso laso liphezulu, ke kufuneka siqinisekise ngokwenqanaba lokusetyenziswa xa kuthengwa, nokuba umatshini othengiweyo unganikeza umdlalo opheleleyo kuwo Intsebenzo, nokuba yeyiphi na ...
Uyenza njani umgquba wenkukhu?
Ngexesha lenkqubo yokuvumba komgquba wenkukhu, kubaluleke kakhulu ukulawula ubushushu. Ukuba amaqondo obushushu asezantsi kakhulu, ayizukufikelela kumgangatho wokuvuthwa; ukuba amaqondo obushushu aphezulu kakhulu, izakha mzimba zomgquba ziya kulahleka lula. Iqondo lobushushu kumgquba liphakathi kwama-30 ...